भारतसँग वार्ता हुन्छ, र समस्याको समाधान पनि हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली « रिपोर्टर्स नेपाल
भारतसँग वार्ता हुन्छ, र समस्याको समाधान पनि हुन्छ : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
प्रकाशित मिति : 2020 September 21, 3:00 pm
परराष्ट्रमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एक महिनाभित्रमा नै परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सबैको सुझावहरुलाई समेत ध्यानमा राखेर परराष्ट्र नीतिको अन्तिम दस्तावेज तयार भएको र एक महिनाभित्रमा त्यो सार्वजनिक गरिने स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सिमा विवादलगायतका नेपाल–भारत द्विपक्षीय समस्या समाधानको लागि वार्ताको पहल भैरहेको जनाए । उनले भनेका छन्,‘जे कम्फर्टेबल दुबै देशका सरकारलाई हुन्छ, हामी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र जुनसुकै लेभलमा कुरा गर्न हामी तयार छौँ ।’ उनले वार्ताको लागि भारत तयार हुने पनि विश्वास दिलाए । होइन, भारत तयार भएर आउँछ ? सीमा विवादको कुरा मिलाउन ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा मन्त्री ज्ञवालीले भने–‘भारत तयार भएरै आउँछ, विवाद समाधान गर्नको लागि । अन्तिम विन्दुमा लग्नको लागि वार्ता गर्नुपर्छ । भारतका पनि तर्कहरू होलान् । त्यति सहज त नहोला । पहिलादेखि अनाधिकृत ढंगले त्यहाँ उपस्थिति छ । त्यहाँबाट पछाडि हट्नका निम्ति कतिपय कठिनाइहरू होलान् । तर जस्तोसुकै कठिनाइहरू भए पनि सत्यलाई स्वीकार गर्नुको उपाय छैन नि त । त्यसकारण वार्ता पनि हुन्छ । समाधान पनि हुन्छ ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री ज्ञवालीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
उच्चस्तरीय वार्ता हुनुपर्छ, नेपालको भू–भाग फिर्ता गराउनको लागि । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीकै बीचमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने एउटा जनमत छ । भारतको विदेशमन्त्रीसँग पनि तपाईले संवाद गर्न सक्नुभएको छैन ? परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता पनि हुन सकिरहेको छैन । अब तपाई भारत जाने कि नजाने ?
किन नसक्ने ? सक्नुनै पर्छ । हाम्रो दायित्व नै त्यही हो । सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको नै मुलुकको सार्वभौमसत्ता हो, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु हो । विगतमा विभिन्न कारणले त्यसमा कमजोरीहरू हुन पुगे । यही सरकार हो जसले यो कुरालाई गम्भीरताका साथ लियो ।
भारत तयार भएरै आउँछ, विवाद समाधान गर्नको लागि । अन्तिम विन्दुमा लग्नको लागि वार्ता गर्नुपर्छ । भारतका पनि तर्कहरू होलान् । त्यति सहज त नहोला । पहिलादेखि अनाधिकृत ढंगले त्यहाँ उपस्थिति छ । त्यहाँबाट पछाडि हट्नका निम्ति कतिपय कठिनाइहरू होलान् । तर जस्तोसुकै कठिनाइहरू भए पनि सत्यलाई स्वीकार गर्नुको उपाय छैन नि त । त्यसकारण वार्ता पनि हुन्छ । समाधान पनि हुन्छ । file photo